Wiricheya-akasungwa ane makore gumi nemanomwe ekubirwa paGunpoint
Posted on March 9, 2015 November 20, 2020 by csr 1687
Mumwe murume akavharirwa ndokupomerwa kubira a wiricheya-akasungwa achiri kuyaruka pamberi peyadhi yake.
"Ndakakatyamadzwa," akadaro Deandray Hall. "Ini ndanga ndichiita sezviri kuitika?"
Horo yakabatwa nekuchengetedza uye yaifunga kuti yaizofa.
Musikana ane makore gumi nemanomwe anogara upenyu ari wiricheya zuva rega rega uye aiti anga achinetseka kuzviita nzira yake yechando paBitter Creek Mugovera manheru apo boka revakomana rakaonekwa pasina.
“Handisi kuvaona vachiuya. Vakauya shure kwangu, ”Hall akarangarira.
Mapurisa akati mudzidzi weBolton High School akabirwa.
"Ati ndipe foni yako," akadaro Hall.
Vakuru vakataura kuti gororo rakaburitsa pfuti uye akarisunda kumusoro kurwisa muviri waHoro.
[btn link = "http://wreg.com/2015/03/08/wiricheya-bound-student-robbed-at-gunpoint / "target =" _ blank "] Verenga Chinyorwa Chekutanga [/ btn]
Hit-Uye-Mhanya Mutyairi Anouraya Miami Mukadzi MuWheelchair
Wiricheya-Yakasungwa Makore maviri Akare Haibvumirwe Kuvandudza Sachigaro neInishuwarenzi